Tag: gadzirira | Martech Zone
Chii chinonzi Kusina Musangano Kukutorera Iwe?
China, July 23, 2015 China, July 23, 2015 Jenn Lisak Golding
Ini handikwanise kukuudza kangani ini ndanga ndiri pamusangano wekufona iyo yaive yakazara kutambisa nguva. Kunyangwe yaive glitchy software, vasaiti vasina kugadzirira, kana njodzi yekuteerera, inopambadza nguva yakawanda nezviwanikwa. Uye zvirokwazvo hazvibatsire kana ini ndonzwa sekuti izvi zvinoitika kupfuura makumi matatu muzana yenguva. Musangano wega wega - online kana uri-munhu - inzvimbo inochengetwa nekambani yako munguva, mari uye zviwanikwa. Kunyangwe iyo mari inoshanduka
10 Matipi Ekusimudzira Yako Inotevera Webinar
Chishanu, December 20, 2013 Mugovera, Chivabvu 7, 2016 Jenn Lisak Golding
Muna 2013, 62% yeB2B yakashandisa webinars kusimudzira zvigadzirwa zvavo, izvo zvinokwira kubva pa42% gore rapfuura. Zviripachena, webinars ari kuwana mukurumbira uye ivo vari kushanda seye inotungamira chizvarwa chishandiso, kwete chete yekushambadzira chishandiso. Nei uchifanira kuzviisa mukati mechirongwa chako chekushambadzira uye bhajeti? Nekuti webinars chinzvimbo seiri yepamusoro zvemafomati mukutyaira anokwanisa anotungamira. Munguva pfupi yapfuura, ndanga ndichishanda nemutengi uye yakazvipira webinar mhinduro, ReadyTalk, pane zvimwe zvemukati zveakanakisa webinar
3 Zvikonzero zvandiri Kubata Webhu Yangu ne ReadyTalk
China, May 3, 2012 Chipiri, June 4, 2013 Isaac Pellerin
Ini ndakatanga kuziviswa ReadyTalk mushure mekuita webinar kunyungudika neGoToWebinar. Ndakanga ndine vashanyi vatatu pachiratidziro kubva kuDenver, San Francisco, neLondon. Vanopfuura mazana maviri vane moyo murefu uye nenyasha vakapinda vakasungirirwa imomo apo patakatarisana nekunonoka kwekuteerera uye kwekuona. Saka ini ndaifanirwa kutsvaga mupi ane akakodzera zvivakwa zvekutsigira izvo zvido zvevose varipo uye varipo. Apa ndipo panogadzirira ReadyTalk. YePeopleer Chiitiko: Iyo YakagadziriraTalk Webinar
Nei uchienda neApplication Service Provider?
Muvhuro, Kukadzi 4, 2008 Chipiri, February 5, 2008 Douglas Karr
Izvo zvinonetsa kutaura kune imwe kambani ine yakasimba IT zviwanikwa uye kuitisa ivo vatenge mune iyo ASP modhi. Vazhinji vanhu vanotenda kuti mutsauko uripakati peESP uye yekambani software yefaira ndeyekuti munhu anoburitsa software kuti mutengi agadzirise uye zvimwe zvinoburitswa pamhepo uko iko kunyorera kuri nyore kuchengetedza. Tichitarisa indasitiri nenzira iyi, ese ari maviri anotaridzika semakambani esoftware. Izvo hazvigone kuve